‘फिस्कल क्लिफ’का कारण विश्वबजार बियरिश
अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा बाराक ओबामाको जितपछि ‘फिस्कल क्लिफ’ बढ्ने आशङ्का अमेरिका गत हप्ता अमेरिकी शेयर बजार ओरालो लाग्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा बाराक ओबामा पुनः निर्वाचित भएपछि लगानीकर्ताहरूको ध्यान त्यहाँको बजेट विवादतर्फ मोडिएको छ । जनवरी १ देखि त्यहाँ लागू गरिएका केही आर्थिक कानू...
मनोजकुमार लालकर्ण वरिष्ठ बजार प्रबन्धक, एलाइन्स इन्स्योरेन्स सावधिक जीवन बीमा एउटा निश्चित अवधिसम्मका लागि गराइन्छ । यसअन्तर्गत एउटा निर्दिष्ट अवधिसम्म बीमित बा“चिरहे बीमित स्वयम्ले बीमाङ्क रकम र सो अवधिसम्मको बोनस प्राप्त गर्छ । बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भए निजले इच्छाएको व्यक्ति वा नज...
बीमा गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था जोसुकैले पनि उधारोमा बीमा गर्नु आफ्नै लागि हितकर हुँदैन । बीमा गर्नुको मुख्य उद्देश्य क्षति भएको अवस्थामा आफूले गरेको बीमा रकमअनुसारको दाबी भुक्तानी लिनु हो । तर, उधारोमा बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूले दाबीको भुक्तानी गर्दैनन् । यदि गरिहालेमा बीमा समितिले त्यस्ता बीमा...
कम्पनी विश्लेषण : छिमेक लघुवित्त विकास बैङ्क लिमिटेड
छिमेक समाज सेवा संस्था, नबिल बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, बैङ्क अफ काठमाण्डू र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको संलग्नतामा यो कम्पनीको स्थापना भएको हो । यो कम्पनीले छिमेक एकेडेमी, छिमेक बजार व्यवस्था कम्पनी लि, छिमेक समाज सेवा संस्था र महोत्तरी छिमेक सहकारी संस्थाजस्ता सहायक कम्पनीमा लगानी गरेको छ । नेपाली समाजमा...
व्यवसाय विस्तार गर्दै नेपाल ऊल हाउस
करीब साढे सात दशक अघिदेखि नेपालमा ऊनी तथा ऊनी कपडाको व्यवसाय गर्दै आएको नेपाल ऊल हाउसले व्यवसाय विस्तार गर्ने भएको छ । हाउसले छिट्टै नै दरबारमार्गमा नयाँ शोरूम खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । विसं १९९४ मा दिव्यरत्न तुलाधरले काठमाडौंको भोटाहिटीमा ऊल हाउसको स्थापना गरी ऊनीको व्यवसाय थालेका थिए । हाल उनका छ...
नेप्से ओभरबट जोनमा
हाल पूँजीबजारमा शेयरको माग बढ्दै गएको पाइएको छ । शेयर बजार परिसूचकको गति नाप्ने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई)को गणनाअनुसार यस्तो देखिएको हो । २०६८ साउनदेखि २०६९ असोज अन्तिम सातासम्मको नेप्से परिसूचकका आधारमा निकालिएको आरएसआई रेखाचित्रले बजार ‘ओभरबट जोन’ (अत्यधिक खरीद भएको क्षेत्र)म...
सातामा डलरको मूल्य १६ पैसा बढ्यो
गत साता अमेरिकी डलरको मूल्य १६ पैसाले बढ्यो । गत आइतवार १ अमेरिकी डलरबराबर ८५ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेकोमा शुक्रवार ८६ रुपैयाँ १५ पैसामा कारोबार भएको छ । गत सोमवार र मङ्गलवार डलरको मूल्य स्थिर रह्यो । तर, बुधवार डलरको मूल्य ७५ पैसा बढेर ८६ रुपैयाँ ७४ पैसा पुगेको थियो । बिहीवार डलरको मूल्य केही घटेर १ डलर...
अमेरिका मिश्रित अन्यत्र बुलिश
अमेरिका गत हप्ता अमेरिकी शेयर बजार मिश्रित रह्यो । समुद्री आँधी स्याण्डीका कारण गत हप्ता न्यूयोर्कस्थित प्रमुख वित्तीय केन्द्र वालष्ट्रीटले बुधवारदेखि मात्र व्यापार शुरू गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा अमेरिकाको बेरोजगारी दर घट्दै गएको र अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि अर्को हप्ता हुने...
सातामा सुनको मूल्य रू. २ सय बढ्यो
गत साता प्रतितोला सुनको मूल्यमा रू. २ सयले वृद्धि भएको छ । मङ्गलवार रू. ५९ हजारमा कारोबार भएको प्रतितोला सुन शुक्रवार रू. ५९ हजार २ सयमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले जानकारी दिएको छ । यो अवधिमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य १ डलरले बढेपछि नेपालमा पनि त्यसको असर परेको हो । मङ्गल...
लगानीको विकल्प बन्न सक्ला कमोडिटिज बजार ?
विगत केही वर्षयता नेपाली वित्तीय बजारमा कमोडिटी बजार लगानीको नयाँ क्षेत्रका रूपमा देखापरेको छ । औपचारिक रूपमा सन् २००६ देखि नेपालमा यो बजारको कारोबार हुन थालेको हो । त्यसपछि नयाँ पुस्ता (युवा उद्यमी)लाई यो क्षेत्रले बढी आकर्षित गरेको छ । हाल बजारमा ६ ओटा एक्सचेञ्ज कम्पनी तथा करीब २ सय ब्रोकर...